I-Final Cut Pro X idlula kubasebenzisi abazizigidi ezi-2 | Ndisuka mac
I-Final Cut Pro X idlula abasebenzisi abazizigidi ezi-2
Kule mihla i NAB, eyona vidiyo inkulu ibanjwa minyaka le eLas Vegas. UApple wayefuna ukubakho ngomnye unyaka. Ngeli xesha umzuzu ufanelekile ngezizathu ezininzi. Ukubheja okubalulekileyo ekwenzileyo ukusukela ukuphela kuka-2016 ngokuhlaziya umhleli wevidiyo yakhe, uFinal Cut Pro X, oshiye eli shishini limangalisiwe. Kodwa kwelinye icala, banethamsanqa, kuba kutsha nje I-Final Cut Pro X ifikelele kubasebenzisi abazizigidi ezi-2. Kwinkomfa yoonondaba ebibanjelwe kumaziko eenkongolo phambi kwamajelo eendaba ahlukeneyo, uApple uphonononge iindaba zomhleli wevidiyo, kunye neziganeko ezifikelelweyo.
U-Apple uyavuma ukuba kubiza ukufikelela kwisigidi sabasebenzisi kumhleli weenkwenkwezi. Nangona kunjalo, ngohlaziyo lwamva nje, ukusuka kwisigidi ukuya kwizigidi ezibini kubachithe imali encinci.
Inguqulelo yangoku ye I-Final Cut Pro X, ekhutshwe ngo-2011 kwaye ekuqaleni yafumana ukugxekwa okungqwabalala. Iingcali zaqonda ukuba yayingeyiyo isoftware yobuchwephesha, abanye bade bathi iApple ithathe inyathelo elibuyela umva. Ekuboneni kokuqala, ukufana phakathi kweMovie (umhleli wasekhaya) kunye noGqibela ukusika Pro X zazininzi, ubuncinci ukusuka kwindawo yokujonga ujongano. Nangona kunjalo, iApple ayiphelanga kwimizamo yayo kwaye iphucula isoftware yokuqala, notshintsho oluncinci kuhlaziyo ngalunye.
Kwiminyaka yakutshanje, sibonile ukuveliswa kohlahlo-lwabiwo mali oluninzi, olwenziwe ngomhleli wobungcali ka-Apple kwaye nangakumbi nangakumbi iingcali zeshishini ziyisebenzisa ngendlela ekhethekileyo. Inyaniso, Ulawulo lwezinto ezibonakalayo, njengoko iApple iqhele kuthi, kunye neelayibrari, iminyhadala kunye neeprojekthi zilungele abapapashi abaninzi.
Ngohlobo lwangoku, i-10.3.x, u-Apple ugqibile ukugqibezela isangqa. Le nguqulo yamva nje yenziwe yafumaneka kubasebenzisi kwikota yokugqibela ye-2016, befumana izimvo ezilungileyo kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-Final Cut Pro X idlula abasebenzisi abazizigidi ezi-2
Hlela imibono yakho nge-Cloud Outliner 2 Pro ye-Mac ngaphantsi kwe-euro
Ungayikhubaza njani iBar yeTouch kwiMacBook Pros entsha